बोलेर नसकिने काजोल र बोल्दै नबोल्ने अजयको प्रेम र बैवाहिक जीवन कसरी भयाे ? कस्तो छ त ? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/बोलेर नसकिने काजोल र बोल्दै नबोल्ने अजयको प्रेम र बैवाहिक जीवन कसरी भयाे ? कस्तो छ त ?
अजय देवगन र काजोलको प्रेमपूर्ण यात्राले यस वर्ष दुई दशक टेक्दैछ । छोटोछोटो समयमा छिटोछिटो प्रेमसम्बन्ध भत्किरहने वर्तमान समयमा पनि याे जाेडीकाे सम्बन्ध भने मज्बुत नै छ । त्यसैले उनीहरूलाई बलिउडको आदर्श जोडीका रूपमा लिइन्छ ।